လင်းလက်တာရာ: June 2013
ငယ်ငယ်တုန်းက သစ်ရွက်တွေ ဟာ ပိုက်ဆံတွေပေါ့
သစ်ရွက်တွေခူးပြီး ရောင်းတမ်းဝယ်တမ်း ကစားကြ
ကြီးလာတော့ ပိုက်ဆံတွေဟာ သစ်ရွက်တွေပေါ့
သစ်တောကြီးတစ်တောမဟုတ်တောင် ပန်းခြံလေးတစ်ခု ခြုံပုတ်လေး တစ်ပုတ် ပိုင်ဆိုဖို့ 
အခု အင်ဒိုနီးရှားသစ်ရွက်တောကြီးဟာ မီးညွှန့် မီးစွယ်တွေ ဖြစ်သွားတယ်
အဲဒီ မီးညွှန့် မီးစွယ်တွေဟာ ပြာတွေ ဖြစ်သွားတယ်
အဲဒီပြာတွေဟာ မလေးကျွန်းဆွယ်အထိ ဖုံးအုပ်
နောက် အိမ်လွမ်းကင်ဆာတွေ အဆုပ်လိုက်ပွင့်နေတဲ့ ငါတို့ အဆုတ်ထဲ
Posted by လင်းလက်တာရာ at 10:44 No comments:
၁၈ နှစ်သားအရွယ်က ကဗျာလေးများ
ငါ့ကို တယောထိုး နေလေတော့တယ်
လေတွေရဲ့နောက်မှာ တိမ်တွေ ပါသွားသလား
ငယ်အိမ်မက်တွေကပဲ ငါ့ကို ခလုတ်နှိပ်တယ်။
အဝေးပြေးလမ်းမရဲ့ ဘီးတွေဟာ ငါတို့ လား။
နားထဲမှာ ခေါင်းလောင်းသံတွေ ခဏခဏမြည်တယ်
ငယ်ချစ်ဦးရဲ့ လက်ဖဝါးနုနုလေးကို သတိရတယ်
အဖေမပါလို့ မစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထမင်းဝိုင်းကလေး
လွမ်းရင် ကဗျာရေးတယ်ဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးလည်း
တစ်ခါတခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှို့ ပစ်လိုက်ချင်တဲ့ ပင့်သက်
'မြို့ကြီးပြကြီး' ဆိုတဲ့ ကွန်ဂရိတောနက်ကြီးထဲ
ဘဝဟာ လူပြောများများနေတဲ့ ရုပ်ရှင်
လောကဓံက ပျံကျဈေးလေးလို ဆူညံနေတော့တယ်
မြို့ပြရဲ့ လျှပ်စစ်မီးသီး တစ်ခုလို ငါ
ဒီနေ့ လည်း ဒီကဗျာလေးကိုပဲ ဝတ်ခဲ့
လမ်းမဟုတ်တဲ့ လမ်းတွေနဲ့စကားပြောရဦးမယ်
မိသားစုရဲ့ သံပြိုင်တေးလေးကို အလွတ်မရသေးဘူး
လူငယ် တဲ့ မီးတောင်လို သာယာခဲ့
သံသရာရဲ့ ရထားဘီးသံက ဂျွတ်ဆတ်ထန်ပြင်း
ကြယ်တွေရဲ့ အလင်းကို မှောက်မချ ပစ်ရက်ဘူး
စိတ်ရဲ့ အဆိပ်တွေနဲ့အပြင်းဖျားတယ်
ဘဝဟာ လူပြောများများနေတဲ့ ရုပ်ရှင်။ ။
သူ့ လက်သည်းရှည်ကြီးတွေနဲ့ 
မလိုအပ်ဘဲ ဘရိတ်ခဏခဏ အုပ်မိ
နားနဲ့ မနာ ခေတ်နဲ့ နာပါ
အချစ်ကို တူးဖော်ကြည့်ဖို့ 
အဟောင်းဆိုင်လေးထဲက ဂျင်းဘောင်းဘီလေး တစ်ထည်ဟာ လှရဲ့။
အမေပြောပြောနေတဲ့ ထပ်ခိုးလေးရဲ့ တန်ဖိုး
အိပ်မက်တွေ တရေးနိုးရလေတယ်။ ။
ပြတင်းပေါက် ၊ သတင်းစာနဲ့ ရေဒီယို
ကျွန်တော့်မှာ ပြတင်းပေါက် တစ်ချပ်ရှိတယ်
မြင်ချင်တဲ့အရာရော မမြင်ချင်တဲ့ အရာရော မြင်နေရတယ်
ကျွန်တော့်မှာ သတင်းစာ တစ်စောင် ရှိတယ်
တွေ့ ချင်တဲ့ အရာရော မတွေ့ ချင်တဲ့ အရာရော တွေ့ နေရတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ ရေဒီယို တစ်လုံး ရှိတယ်
ကြားချင်တဲ့ အရာရော မကြားချင်တဲ့ အရာရော ကြားနေရတယ်။
မြင်ချင်တဲ့အရာက မမြင်ချင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်သွားတယ်
တွေ့ ချင်တဲ့ အရာက မတွေ့ ချင်တဲ့ အရာ ဖြစ်သွားတယ်
ကြားချင်တဲ့ အရာက မကြားချင်တဲ့အရာ ဖြစ်သွားတယ်။
လူ့ ဘဝဟာ ပြတင်းပေါက်နဲ့ တူတယ်
လူ့ ဘဝဟာ သတင်းစာနဲ့ တူတယ်
လူ့ ဘဝဟာ ရေဒီယိုနဲ့ တူတယ်။
အပေါင်ဆိုင် ပို့ ထားရ
ဘဝဟာ စက္ကူနဲ့ ထုတ်ပိုးမိတဲ့ မီးတောက်
ဖြစ်နိုင်ရင် အစာအိမ်တစ်ခြမ်းလောက် ထုတ်ရောင်းချင်တယ်
အရေးပေါ် ခွဲစိပ်ခန်းထဲက ရပ်ကွက်လေးရဲ့ အော်သံ။
Posted by လင်းလက်တာရာ at 10:26 No comments:
အွန်လိုင်းလူငယ်ကဗျာစကားဝိုင်း။ ဆရာအောင်ရင်ငြိမ်း မေးပြီး လင်းလက်တာ၇ာ ဖြေဆိုပါတယ်
မေး ၁။ အောင်ချိမ့်အစ မိုဃ်းဇော် အဆုံး ပင်မရေစီး ခေတ်ပေါ်ကဗျာခေတ်တုန်းက အနုပညာသြဇာနဲ့ ၀ါသမ္ဘာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ၀ါရင့်ကဗျာဆရာ အများစု အနေနဲ့ ခေတ်နဲ့အညီ ကဗျာရေးဟန်အသစ်တွေ
ခေတ်ပေါ်ကဗျာအဟောင်းထဲမှာပဲ ရပ်တန့်ကျန်နေခဲ့ကြပြီလို့ ကိုယ် ထင်တယ်။ အာရုံခံစားပုံ လတ်ဆတ်ပြီး လူငယ်ဆန်တဲ့ နေမျိုး၊ ပိုင်၊ မောင်ဆေးရိုး၊ မင်းဆွေနှစ်၊ နိုင်မွန်အောင်သွင်၊ ခရမ်းပြာထက်လူ၊
ခိုင်မြဲကျော်စွာ၊ မောင်ဖီလာ၊ ကိုရွေး သူတို့ကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့လေ။ ကဲ ညီလေးတို့ အမြင်ကို ပြောပါဦး။
ဖြေ ၁။ ။
ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ဆရာတွေဟာ ကျွန်တော်လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ ဆရာသမားတွေပါပဲဗျာ။ သူတို့ ကဗျာတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။ ရပ်တန့် ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုတာထက် ခရီးတစ်ခု ကို ခရီးပေါက်အောင် ချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ မှတ်တိုင်တွေ စိုက်ထူခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့ဒီ မှတ်တိုင်နဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့ အနုပညာလောဘကြီးသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနုပညာကို ချွန်မြအောင် သ,ရင်း သ,ရင်း ရွေ့ နေတဲ့ ခေတ်ကြီးနဲ့ အတူ လိုက်ပါရွေ့ လျားရင်း ရှိရင်းစွဲ မှတ်တိုင်ကနေ နောက်မှတ်တိုင်ဆီ နောက်ခြေလှမ်းတွေ ခရီးဆက်နေကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တချို့ ကလည်း ရှိရင်းစွဲ မှတ်တိုင်မှာ သူ့ တို့ အလုပ် သူတို့ ပီပီသသ လုပ်ဆောင်နေကြဆဲပဲလေ။ ဒါဟာ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ကိုယ် ၊ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ့်သမိုင်းနဲ့ ကိုယ်ပဲလေ။ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်ဖို့ အတွက် လူ့ ဘဝကို ရရှိခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။တစ်ခုပါပဲ။ ကဗျာရေးသူတွေသာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကျန်ရစ်၊ ဒါမှမဟုတ် သေဆုံးသွားကြတယ်။ ကဗျာကတော့ ခေတ်နဲ့ အတူ ရွေ့ လျား စီးဆင်နေမှာပဲ။ သမင်လည်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အစဉ်အလာကဗျာ လေးလုံးစပ်တွေကနေ မော်ဒန်၊ မော်ဒန်ကနေ ခေတ်ပေါ်၊ ခေတ်ပေါ်ကနေ အခု ခေတ်ပြိုင်လို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ ကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်း ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ကွန်တမ်ပိုရာရီ အခင်းအကျင်းထိပေါ့။ လက်မခံချင်လည်း လက်မခံလို့ မရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်နေပါပြီ။
မေး ၂။ ညီလေးတို့က ၂၀၁၀ အလွန်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆုံး မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ကဗျာဆရာတွေပေ့ါ။ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာရဲ့ အနာဂတ်အလားအလာက ညီလေးတို့ ရဲ့ အနုပညာ ဖန်တီးမှုအပေါ်မှာ မူတည်နေပြီ။ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာယဉ်ကျေးမှု အသစ်ဟာလည်း ညီလေးတို့ လက်ထဲ ရောက်နေပြီလို့ ကိုယ် ယူဆတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်ကဗျာဆရာတွေနဲ့ လူမှုရေးနဲ့ အနုပညာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု သိပ်မရှိတဲ့ ၀ါရင့်ကဗျာဆရာတွေက နောက်ဆုံး မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ ပေါ်ထွက်နေပြီဆိုတာ သတိမထားမိကြသေးဘူး။ တချို့ ကဗျာဆရာတွေအယ်ဒီတာတွေကျတော့လည်း သတိထားမိပေမဲ့ လူငယ်တွေကို အသိအမှတ်ပြု တန်ဖိုးထား နေရာပေးဖို့ ၀န်လေးတွန့်ဆုတ်နေကြသေးတယ်။ သူတို့ကို ဘာပြောချင်လဲ။
နောက်ဆုံးမျိုးဆက်သစ် ဆိုတာ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ပေါ်ထွက်ခဲ့တာပဲ။ ဒါဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သဘာဝတစ်ခုပါ။ အဲဒီ့ မျိုးဆက်သစ်ကပဲ အချိန်ကာလ အချိုးအကွေ့ တစ်ခု အရောက်မှာ မျိုးဆက်ဟောင်းဖြစ်သွားတာပါပဲ။ အဟောင်းနေရာမှာ အသစ်က အော်တိုမစ်တစ် ဝင်လာမှာပဲ။ အဓိကက စစ်မှန်တဲ့ အသစ်ဖြစ်မဖြစ် အရေးကြီးတာပါ။ ဒါဟာ လူငယ်တွေအတွက် ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ပဲ။ လေးလံတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပဲ။ ညံ့လို့ မရပါဘူး။ အချောင်လိုက် ရေသာခိုနေလို့ လည်း မရတော့ပါဘူး။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ နဲ့ ထင်သာမြင်သာ ရှိရပါတော့မယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်လည်း မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ရဲ့လား ဆိုတာ သံသယဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အားရမိတယ်လို့ ကို မရှိသေးဘူး။ ကဗျာကျောင်းသား အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လေ့လာဆဲ ၊ သင်ယူဆဲ၊ ကြိုးစားဆဲပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်ရ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာရဲ့ ဂယက်ဟာ ပရင့်တ်မှာထက် အွန်လိုင်းမှာက ပိုပြီးလှုပ်ခတ်နေပါတယ်။ အွန်လိုင်းသုံးနေတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ကဗျာချစ်သူတွေ ပိုပြီးသတိထားမိမှာပါ။ ဆရာမောင်ပြည့်မင်း၊ ဆရာသစ္စာနီ၊ ဆရာနိုင်မွန်အောင်သွင်၊ ဆရာ ခရမ်းပြာထက်လူ၊ ဆရာစေတ၊ ဆရာ အောင်ရင်ငြိမ်း၊ ဆရာ မောင်ယုပိုင်၊ ဆရာ လူဆန်း ၊ ဆရာနရနီ၊ ဆရာလွန်းဆက်နိုးမြတ် စတဲ့ ဝါရင့် ကဗျာဆရာတွေ ကိုယ်တိုင် အွန်လိုင်းပေါ်ကလူငယ်တွေရဲ့ ကဗျာတွေကို အရေးတယူဖတ်ပြီး ထင်မြင်ချက်တွေ၊ ဟိုက်လိုက် တွေ ၊ ကွန်မန့် တွေ ပေးကြတယ်။ လူငယ်တွေကို လက်တွဲခေါ်ကြတယ် အားပေးကြတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။ လူသားဆန်တဲ့ ကြည်နူးဖွယ် ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုပါ။ လူငယ်တွေအပေါ် အလေးထားတဲ့ လူကြီးတွေကိုလည်း ရှိရင်းစွဲ လေးစားမှုတွေကို ၂ ထပ်ကိန်းတင်မိပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာရဲ့ အနာဂတ်အလားအလာဟာ လူငယ်တွေပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် မပြည့်စုံပါဘူး။ ဒီနေရာ မှာ အလေးအနက် ထပ်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေဟာ ကဗျာပညာရှင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာဆဲ သင်ယူဆဲ ကြိုးစားဆဲ ကဗျာကျောင်းသားတွေ ဆိုတော့ အစွန်းအထင်း အမှားအယွင်းတွေ တလွဲဆံပင်ကောင်းတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာသမားတွေရဲ့ ထောက်ပြမှု ၊ အတိမ်းအစောင်းတွေ ကို လမ်းကြောင်း ကျောင်းပေးတာမျိုးတွေ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွကိ ရွှေပါပဲ။ ခေတ်ပြိုင် မြန်မာကဗျာရဲ့အလားအလာ ပိုပြီးကျယ်ပြန့် ခိုင်မာဖို့ ဆိုရင် အွန်လိုင်းအပြင် ပရင့်တ်ဘက်မှာပါ ပေါက်ရောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပရင့်ဘက်မှာတော့ အယ်ဒီတာတွေနဲ့ ဆိုင်တာပေါ့ဗျာ။ အယ်ဒီတာတွေကလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ပါပဲ။
မေး ၃။ လက်ရှိ အခြေအနေအရ ၂၀၁၀ အလွန် ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာ အခင်းအကျင်းမှာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာအပြင် အယ်လ်ပီ ၊ နီယိုမော်ဒန်၊ ကွန်ဆက်ခြူရယ်၊ စမ်းသပ်၊ စကားပြေကဗျာ၊ ဖလာ့ဖ် စသဖြင့် ကဗျာအမျိုးအစားသစ်တွေ အယူအဆတွေ အမျိုးမျိုး ရှိနေကြတယ်။ အဲဒီ ကဗျာအယူအဆ/ အနုပညာ လက်ရာတွေအပေါ် ညီလေးတို့ရဲ့ အမြင်။
ဖြေ(၃) ခေတ်ပြိုင် မြန်မာကဗျာ အခင်းအကျင်းမှာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ် ကဗျာအပြင် ကဗျာအမျိုးအစား အသစ်တွေ အပြိုင် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ထွက်လာတာဟာ မြန်မာကဗျာလောကရဲ့ တိုးတက်တဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါပဲ။ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဘယ်လို ကဗျာအမျိုးအစားသစ်တွေ ပေါ်ထွက် လာဦးမလဲ ဆိုတာ ရင်ခုန်စရာကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာစကား ဘာသာတရားပေါင်းစုံ အတူတကွ မှီတင်းနေထိုင်သလိုမျိုး ကဗျာနိုင်ငံတော်မှာ ကဗျာအမျိုးအစားပေါင်းစုံ အတူတကွမှီတင်းနေထိုင်ကြခြင်းပေါ့။ တိုက်ခိုက်ရန်ပြုနေမယ့်အစား ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကိုယ် ချစ်ချစ်ခင်ခင်စည်းစည်းလုံးလုံး အတူတကွ နေထိုင်သမှုပြုကြမယ်ဆိုရင် ကဗျာနိုင်ငံတော်ကြီး ငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့။ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းမှာပေါ့။ ဘယ်လိုကဗျာအမျိုးအစားသစ်မဆို ပင်မရေစီး ခေတ်ပေါ်ကဗျာလိုပဲ ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ ကျောရိုးဆစ်တွေ ရှိနေဖို့ အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
မေး ၄။ အဲဒီ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေထဲက ညီလေးတို့ အာရုံတိမ်းညွတ်မှု ရှိတဲ့ ကဗျာအမျိုးအစား။ အဲဒီ ကဗျာဗေဒအပေါ် နားလည်ခံယူထားပုံ အနှစ်ချုပ်။ တကယ်လို့ ညီလေးတို့ လက်ရှိရေးနေတဲ့ ကဗျာအနုပညာလက်ရာ တွေကို ဖန်တီးသူကိုယ်တိုင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခု ခွဲခြားပြောပြပါ။ ကိုယ့် အနုပညာကိုယ် တခြားသူတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားအောင် ပြောပါလို့ မေးရင် ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။ တချို့ ကဗျာဆရာတွေ/ ကဗျာဖတ်သူတွေကတော့ ကဗျာအနုပညာကို အမည်အမှတ်တံဆိပ်တွေ တပ်တာအပေါ်ယံ ကိစ္စတွေပဲလို့ ယူဆပြီး နှစ်သက်လက်ခံမှု မရှိကြဘူး။ ကိုယ့် အမြင်ပြောရရင် ကဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကတခြား အနုပညာ အမျိုးအစားတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ စာပေပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးပဲလေ။ အဲဒါကြောင့် မေးတာပါ။
အဖြေ(၄) ။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ အခင်းအကျင်းမှာ ဘယ်လိုကဗျာအမျိုးအစားမဆို ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကဗျာရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အားလုံးကို ခြုံငုံလေ့လာသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကတော့ ကဗျာအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းအပေါ် အာရုံတိမ်းညွှတ် သွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ကဗျာအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းနဲ့ လည်း မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ကဗျာအမျိုးအစားမျိုးစုံရဲ့ လွှမ်းမိုးရိုက်ခတ်မှုတွေ ကတော့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ အနည်းနဲ့ အများပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်က ကဗျာအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုး ရေးစွမ်းဖန်တီးနိုင်တဲ့ အစွမ်းအစ မရှိတော့ ရှိနှင့်ပြီးသား ကဗျာအမျိုးအစားတွေထဲကပဲ ကျွန်တော် သဘောကျ နှစ်သက်တာ တွေကို ငှားယူသုံးစွဲပြီး ပေါင်းစပ်ရေးသားကြည့်တဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကဗျာရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ဘာတွေ ရေးနေလဲ ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေ ရေးနေလည်းဆိုတာတော့ သိသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်စီးနေတာ ရထားလား ကားလားဆိုတာတော့ သိထားရမယ် မဟုတ်လားဗျာ။ လောလောဆယ် Hybrid ပါပဲ။ ကျွန်တော်အရေးအသားအများစုဟာ အယ်လ်ပီရဲ့ အငွေ့ အသက်တွေ၊ ပို့ စ်မော်ဒန်ရဲ့ ပိုင်းစစိတ်မွှာမှု fragments တွေ၊ နီယိုမော်ဒန်ရဲ့ အာရုံခံစားပုံနဲ့ နောက်ခံအယူအဆ တချို့ တွေ ရောယှက်ပါဝင်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ collage နဲ့ collaborate တွေလည်း စိတ်ဝင်တစား ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ အခင်းအကျင်းဟာ အနံ့ အရသာ မျိုးစုံ ခင်းကျင်းထားတဲ့ ပွဲတော်အုပ်ကြီးနဲ့ တူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် စားသုံးနိုင်တာ မဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲ ရှာဖွေရင်းချဲ့ ထွင်ရင်း စမ်းသပ်ရင်း ဥာဏ်မီသလောက် ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်ရမှာပါပဲ။ တံဆိပ်တွေကတော့ ကဗျာရေးသူကိုယ်တိုင် လက်ခံသည် ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည် ဖြစ်စေ ကပ်ပါလာမှာပဲ။ တတ်သိနားလည် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ကိုယ်တွယ်သင့်တဲ့ ပညာရပ်ဆန်တဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ။ ကဗျာရေးသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာအနည်းငယ်ကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး တံဆိပ်ကပ်လိုက်တာ အမျိုးအစားခွဲလိုက်တာမျိုးဟာ အဲဒီကဗျာရေးသူအပေါ်မှာ ဘယ်အတိုင်းအတာ ဘယ်ကာလထိ ခံမလဲ။ မသေချာပါဘူး။ ခေတ်ကလည်း ရွေ့ နေပါတယ်။ ကဗျာတွေကလည်း ရွေ့ နေပါတယ်။ ကဗျာရေးသူတွေကလည်း တစ်နေရာတည်း ကျောက်ချ မနေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေကို အမျိုးအစားခွဲနိုင်ပါတယ်။ တံဆိပ်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတံဆိပ် အဲဒီအမျိုးအစား ဘယ်အတိုင်းအတာထိ တည်ရှိနေမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အချိုးအကွေ့ တစ်ခုခုမှာ အားလုံးဟာ ပြောင်းလဲ သွားနိုင်လို့ ပါ။ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ အရပ်ဒေသတွေကိုလည်း ခရီးထွက်ချင်ပါသေးတယ်။
မေး ၅။ ညီလေးတို့ အနေနဲ့ ကဗျာအနုပညာ လက်ရာတစ်ခုကို ဘယ်လို အတွေးအခေါ် ဘယ်လို အာရုံခံစားပုံ ဘယ်လို အတတ်ပညာပိုင်း နည်းစနစ်ပိုင်းတွေနဲ့ ရေးသားဖန်တီးနေကြသလဲ။ ကဗျာရေးသားခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို နောက်ခံ အယူအဆနဲ့ ခံယူ ယုံကြည်ချက်တွေ ရှိနေကြသလဲ။
အဖြေ (၅) ခေတ်ပြိုင်ကဗျာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ အတွေးအခေါ် အာရုံခံစားပုံ အတတ်ပညာပိုင်း နည်းစနစ်ပိုင်းတွေ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ သိထားသင့်ပါတယ်။ တချို့ ကလည်း ကဗျာရေးဖို့ တစ်ခုတည်းသာ အာရုံစိုက်ပြီး poetic ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ၊ Ideology ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ သိပ်ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး။ ဒါတွေ ပြောဖို့ လည်း ဝန်လေးတွန့် ဆုတ်တတ်ကြတယ်။ လောလောဆယ် လက်လှမ်းမီသလောက် လေ့လာနေဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ သီဝရီတွေ နည်းစနစ်တွေကြား ကိုယ့်ကဗျာလိပ်ပြာလေး ပိတ်မိညပ်သေမသွားအောင် ရှဉ့်လည်း လျှောက်သာ ပျားလည်းဆွဲသာ ဂရုစိုက်ချင်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်နဲ့ တစ်ပုဒ် ပုံစံခွက်ထဲကအတိုင်း ထွက်ကျလာတာ မဟုတ်ပဲ လွတ်လပ်လန်းဆန်းနေတာမျိုးပေါ့။ ဖြစ်ချင်တာကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ အတွက်ကလည်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဗျာရေးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ poetic ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ Ideology ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ သဒ္ဒါအလင်္ကာရ နဲ့ အတ္ထါအင်္လကာရ နှစ်ရပ်စလုံးပါအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အားထုတ်ပါတယ်။ ခေတ်စနစ်၊ နိုင်ငံရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊ လူအဖွဲ့ အစည်းကြီးရဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေ၊ ပုဂ္ဂလအာရုံခံစားမှုတွေ၊ စတဲ့ အရာတွေကို ဘာသာစကားနဲ့ hybrid လုပ်ရေးဖြစ်တာများပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် Expression နဲ့ Construction ကို ပေါင်းစပ်ရေးသားဖို့ အားသန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရိုက်ခတ်လာတဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ ကပ်ငြိလာတဲ့ သိမှုနဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ဘာသာစကားကို ကြားခံထားပြီး ပေးပို့ စေသလို၊ ဘာသာစကားထဲကပဲ သိမှုနဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြုလုပ်တည်ဆောက်ရတာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားသဘောကျမိပြန်တယ်။ ဘောလုံးသမားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ဘယ်ခြေရော ညာခြေရော သန်ရပါ့မယ်။ ခေါင်းတိုက်ဘောတွေ ဖရီးကစ်တွေ၊ အလိမ်အခေါက်၊ သက်လုံ၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ နည်းစနစ် ၊ အားကစားစိတ်ဓါတ် စတဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ ပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကဗျာရေးသူကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက် သိသလောက် ဥာဏ်မီသလောက်နဲ့ဂိုးရှူးဖို့ ဘယ်ခြေညာခြေတော့ ရွေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး ၆။ မြန်မာနိုင်ငံက ကွန်ဆက်ခြူရယ်၊ အယ်လ်ပီ စသဖြင့်နဲ့ ပို့စ်မော်ဒန် ပထမမျိုးဆက် စာပေအယူအဆတွေကို လက်ခံယုံကြည်တဲ့ ကဗျာဆရာတွေမှာ ကဗျာဆရာရဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလအာရုံခံစားမှုကို အဓိကမထားတဲ့၊ ခေတ်စနစ်လူမှုဝန်းကျင်ရဲ့ အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုချင်တဲ့ အယူအဆမျိုးတွေ ရှိနေကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ အယူအဆတွေက ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်က ပြင်သစ်နဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Aestheticism ရဲ့ စာပေအနုပညာ အယူအဆတွေ။ Oscar Wilde တို့လို ကိုယ်တို့ဆီမှာဆိုရင် ဆရာသစာနီတို့လိုပေ့ါ အနုပညာရသအဓိက၀ါဒီတွေက သန့်စင်တဲ့ အနုပညာဟာလူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေနဲ့ မရောထွေးသင့်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ကြတယ်။ အနုပညာဟာ အနုပညာအတွက်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်က Aestheticism ရဲ့ အနှစ်ချုပ် အယူအဆပေ့ါ။ ညီလေးတို့ အမြင်ကရော...ကဗျာအနုပညာမှာ ကဗျာဆရာရဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အာရုံခံစားမှုနဲ့ခေတ်စနစ်လူမှုဝန်းကျင်အပေါ် အမြင်တွေ ပါသင့် မပါသင့်။
ဖြေ ၆။ ကဗျာအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီမှာ ယျေဘူယျသွင်ပြင် လက္ခဏာတွေ၊ ဒေါက်တိုင်တွေ ကတော့ သူ့ အယူအဆနဲ့ သူ ရှိနေတာပဲ။ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ကဗျာစားသုံးသူချင်းလည်း မတူညီနိုင်ပါဘူး။ အသီးအရွက်ကြိုက်သူနဲ့ အသားငါးကြိုက်သူ။ ကိုယ်က အသားငါး မစားလို့ အသားငါးစားသူတွေကို ရန်လုပ်စော်ကားထိုင်ဆဲ မနေသင့်ဘူးလေ။ ပွဲတော်အုပ် ဥပမာလို ပဲပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟင်း ရွေးနှိုက်စားရုံပါပဲ။ ယဉ်ကျေးမှု ခေတ်စနစ်နဲ့ မျက်မှောက်ခေတ် လူမှုအဖွဲ့ အစည်း အကြောင်းချင်းရာတွေက နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ လူသားတွေ အပေါ် ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ ရှောင်လွှဲလို့ မလွတ်ပါဘူး။ ဒါတွေရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မီးမောင်းထိုးပြသင့်တယ်။ ရှုမြင်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ ' ငါ ' ဗဟိုပြုကိစ္စတွေကလည်း ခုထိ အငြင်းအခုန်ကောင်းတုန်းပါပဲ။ ' ငါ' နဲ့'ငါ့ ခံစားမှု ဟာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာမှာ အဓိက ဇာတ်ဆောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတချို့ က 'ငါ' ဗဟိုပြုတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖျောက်ဖျက်ကြိုးစားလာကြတယ်။ ငါ' ကို ဆောက်သွားနဲ့ တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဖဲ့ထုတ်ကြတယ်။ ငါ' ပါနေခဲ့ရင်လည်း အဲဒီ 'ငါ' ဟာ 'ငါ ' ဗဟိုပြု ' ငါ' မဖြစ်ရလေအောင် ပြုလုပ်ကြတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းဆို Parody ပုံစံ 'ငါ' တွေ ခေတ်ပြိုင်ထဲမှာ ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ဦးတည်အမြင်အရ လူအုပ်ကြီးထဲမှာ ရောနှောပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူသားရဲ့ Identity ကို ရှာဖွေတည်ဆောက်တာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာဆရာတစ်ဦးတည်းမှာပဲ 'ငါ' ဗဟိုပြုကဗျာတွေ ချည်းပဲ ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ ငြီးငွေ့ စရာကောငိးပြီး ကဗျာအနုပညာအမြင် အရ ဘောင်ကျဉ်းလွန်းနေမှာပါ။ ဒီလိုပါပဲ ကဗျာဗေဒအယူအဆတွေအရ 'ငါ'ကို လုံးဝကြီး ပစ်ပယ်ထားပြန်ရင်လည်း ကဗျာဗေဒအယူအဆတွေအရ မှန်ကန်ပေမယ့် အနုပညာအမြင်အရတော့ ဘောင်ကျဉ်းနေဦးမှာပဲ။ ငါ ဆိုတာ အတ္တပါပဲ။ ကဗျာရေးသူတွေဟာ ပုထုဇဉ်တွေပါပဲ။ ပုထုဇဉ်မှန်ရင် အတ္တနဲ့ မကင်းပါဘူး။ ” ငါ ” ဗဟိုမပြုတဲ့ ကဗျာတွေကရော ငါ့ကဗျာမှာ “ငါ“ ဗဟိုမပြုအောင် ရေးမယ်ကွာ။ ငါ့ ကဗျာအမျိုးအစားမှာ “ငါ” ကိုဖဲ့ထုတ်မယ်ကွာ ဆိုတဲ့ “ငါ“ အတ္တကြီး ပါနေပြီမဟုတ်လား။ ဆိုတော့ ကဗျာရေးသူမှာ အတ္တမကင်းစင်သေးသမျှ ကဗျာအနုပညာမှာ “ ငါ” ကင်းစင်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရပါ့မလား။ ကဗျာနဲ့ ကဗျာရေးသူကို ပူးတွဲ မမြင်သင့်ဘူးဆိုပေမယ့် လူဆိုတာ အတ္တနဲ့ မကင်းကြောင်း ပြောပြတာပါ။ အနုပညာ က အရမ်းကို ကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းပါတယ်။ ကဗျာဆရာတွေရဲ့ အတ္တကြောင့် ကျဉ်းမြောင်းနေရတာပါ။ အနုပညာမှာ အရာအားလုံးပါသင့်ပါတယ်။ အနုပညာကို မကန့် သင့်ပါဘူး၊ မသတ်သင့်ပါဘူး၊ မကန့် သတ်သင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ' ငါ' ကို လုံးဝ ပစ်ပယ်လိုက်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ တစ်ခါတလေ ဇာတ်ဆောင်၊ တစ်ခါတလေ ဖြတ်လျှောက်ပါပဲ။ အနုပညာဟာ ပြည်သူအတွက်၊ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ အနုပညာဟာ အနုပညာရှင်အတွက် ၊ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ အနုပညာဟာ အနုပညာအတွက်၊ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အနုပညာဟာ အဲဒီအရာတွေ အားလုံးအတွက်ပါ။
မေး ၇။ ကိုယ့် အမြင်ပြောရရင် မြန်မာစာပေလောကမှာ Realism အယူအဆနဲ့ တန်ဖိုးစံနှုန်းတွေကို စွဲလမ်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အယ်ဒီတာတွေနဲ့ စာရေးဆရာတွေ ရှိနေလို့ မြန်မာဝတ္ထုတို/ အက်ဆေး အရေးအသားတွေဟာ Realism နယ်ပယ်ထဲမှာပဲ ပိတ်မိနေကြပြီး မြန်မာစကားပြေယဉ်ကျေးမှု အသစ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တန့်နေတာလို့ မြင်မိတယ်။ ၁၉၉၅ ၀န်းကျင်ကနေ ၂၀၀၅ လောက်အထိ ခေတ်စားရျင်သန်ခဲ့တဲ့ မော်ဒန်နဲ့ ပို့စ်မော်ဒန် စကားပြေတွေကတော့ ခြါင်းချက်ပေါ့လေ။ ကဗျာအနုပညာမှာ ဆိုရင်လည်း Modern Conservative ဖြစ်နေတဲ့ ၀ါရင့် ၀ါနုကဗျာဆရာတွေ၊ အယ်ဒီတာတွေ ကဗျာဖတ် ပရိသတ်တွေ ရှိနေကြသေးတယ် ထင်တယ်။ အဲဒီလို Modern Conservative တွေကို မြန်မာကဗျာယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မလိုလားတဲ့သူတွေ၊ အနှောင့် အယှက် အဟန့်အတား ဖြစ်စေမယ့် သူတွေလို့
ဖြေ ၇ ။ ။မြန်မာစကားပြေတွေဟာ မြန်မာကဗျာတွေထက် တိုးတက်မှု နှောင့်နှေး နေတာ အားလုံးမျက်မြင်ပါပဲ။ စကားပြေမှာက realism တွေ အားကောင်းမောင်းသန်ဖြစ်ဆဲပါပဲ။ ဒါဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမှောင်ခေတ်မှာ နှစ်ရှည်ကြာမြင့်စွာ နစ်မြုပ်ခဲ့တာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ် လို့ လည်း ပြောနိုင်တာပဲ။ ဆန်းသစ်တဲ့ စကားပြေရေးဟန်တွေ၊ မော်ဒန်နဲ့ ပို့ စ်မော်ဒန် စကားပြေတွေ ရေးသားခဲ့/ နေသူ အများစုဟာ ကဗျာဆရာတွေ ဖြစ်နေတာကလည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ပါ။ modern conservative တွေကို မြန်မာကဗျာယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ အနှောက်အယှက် အဟန့် အတား ဖြစ်စေမယ့် သူတွေလို့ ကျွန်တော် မသတ်မှတ်ချင်ပါဘူး။ အနည်းနဲ့ အများတော့ အနှောက့်အယှက် အတားအဆီး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပန်းတိုင်ရှိရာ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မလျော့သောဇွဲနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်သွားမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ခုကို ရရှိလာမှာပါပဲ။ အနုပညာဟာ စစ်အစိုးရမှ မဟုတ်တာ။ ဟစ်ပ်ဟော့ပ်တွေ အောင်မြင်ဖို့ ရော့ခ်တွေ အမှိုက်တောင်းထဲ/ ရေဆိုးမြောင်းထဲ ထိုးကျပေးလိုက်ရတာမှ မဟုတ်တာ။ အနုပညာယဉ်ကျေးမှုအသစ်တွေ ပေါ်ထွန်းဖို့ အနုပညာယဉ်ကျေးမှုအဟောင်းတွေ မီးရှို့ ဖျက်စီး ပစ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အနုပညာယဉ်ကျေးမှု အဟောင်းတွေဟာ တလေးတစား တမြတ်တနိုး ထိန်းသိမ်းထားသင့်တဲ့ အရာတွေပါ။
မေး ၈။ အွန်လိုင်း ကဗျာယဉ်ကျေးမှုဘက် တစ်ချက်လောက် လှည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ အွန်လိုင်းက ကဗျာဆရာတွေနဲ့ ကဗျာတွေအပေါ် ညီလေးတို့ အမြင်ကို အုပ်စုနဲ့ အမျိုးအစားတွေ ခွဲခြားဝေဖန်ပေးပါ။ အွန်လိုင်းနဲ့ ပရင့်တ်မီဒီယာ ပဋိပက္ခ ကိစ္စ၊ အနုပညာဗီဇနဲ့ ကဗျာဖန်တီးမှု အတွေ့အကြုံ အနုအရင့်ကိစ္စ၊ အယ်ဒီတာ မရှိတဲ့ မီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကဗျာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးလို့ရနေတဲ့ အခွင့်အလမ်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး၊ အနုပညာ အဆင့်အတန်း သိပ်မရှိတဲ့ ကဗျာတွေအောက်က Like & Comment ကိစ္စတွေက အစပေ့ါ။
ဖြေ ၈။ ။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေရဲ့ အကျိုးရလဒ်က အွန်လိုင်းမှာ ကဗျာရေးသူတွေ အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ ဖြစ်လာတာပါပဲ။ အွန်လိုင်းက ရှိနှင့်ပြီးသား လူငယ်တွေအပြင် ပရင့်တ်သမားတွေပါ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာတော့ အတော်ကို မြိုင်လာပါတယ်။ အုပ်စုတွေ အမျိုးအစားတွေကတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ။ အစုံပလုံပါပဲ။ ကျွန်တော် သိသလောက်တောင် လူငယ်ကဗျာရေးသူတွေ တော်တော်ကြီးကို များနေတယ်။ နာမည်တွေ အရမ်းများလွန်းလို့ ကျွန်တော် အကုန်မပြောနိုင်လို့ ချန်လှပ်ပရစေ။ တွေ့ မိတဲ့ ကဗျာအမျိုးအစား အများစုကတော့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ၊ lp နဲ့lp နွယ်ကဗျာတွေ ၊ နီယိုမော်ဒန်နဲ့ပို့ စ်မော်ဒန်၊ စကားပြေ၊ စမ်းသပ်၊ ကော့လာ့ဂ်ျ၊ ဖလာ့ဖ်တွေ၊ hybrid တွေ။ ဆူရီရယ်၊ ဒီဂျစ်တယ် ကဗျာတွေ၊ အစုံပါပဲ။ အနည်းနဲ့ အများပဲကွာတာပါ။ အွန်လိုင်းနဲ့ ပရင့်တ်ကတော့ အရင်လောက် အဖုအထစ်တွေ သိပ်မရှိတော့ဘူးပါဘူး။ သမီးရည်းစားအဆင့်တောင် ရောက်လောက်ပါပြီ။ ပရင့်တ်သမားတွေ အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်လာသလို အွန်လိုင်းသမားတွေလည်း ပရင့်ပေါ်တက်လှမ်းနေကြပါပြီ။ မဂ္ဂဇင်းတွေ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေ အသုံးပြုလာတာ အွန်လိုင်းနဲ့ ပရင့်ကွာဟ မှုကို ကျဉ်းမြောင်းစေတာပါပဲ။ မဂ္ဂဇင်းတိုင်းလိုလို အီးမေးလ်လိပ်စာတွေ သုံးလာနိုင်မယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါ်က လူငယ်ကဗျာဆရာတွေ ပရင့်တ်ပေါ် ခပ်စိပ်စိပ်မြင်လာနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းချည်းသက်သက် ရေးသားနေတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အွန်လိုင်းရဲ့ အားသာချက်က ကိုယ့်အမြင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချပြလို့ ရတယ်။ ဒ့ါက ကဗျာအနုပညာ ကို ပိုပြီး ကျယ်ပြန့် စေတဲ့အချက်ပေါ့။ ဖက်သူဆီက ချက်ချင်း တုန့် ပြန်မှုရတယ်။ ပရင့်တ်မှာဆို ကိုယ့်ကဗျာ စာဖတ်သူဆီရောက်ဖို့ အဆင့်ဆင့် ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ အယ်ဒီတာက မကြိုက်လို့ ပလုံစွက်လိုက်ရင် ကိစ္စပြတ်ရော။ ဆိုးကျိုးကတော့ ပရမ်းပတာ နိုင်လာတယ်။ မင်းမဲ့ဆန်လာတယ်။ copy paste တွေကလည်း ခေတ်စားတော့ ခပ်တည်တည် ကလောင် ပြောင်းတပ်ခံရတာတွေ ပေါ့။ like တွေ comment တွေကိစ္စကတော့ ကဗျာရေးသူအတွက် အားအင် ဖြစ်စေနိုင်သလို like တွေ comment တွေ ထဲမှာပျော်ဝင်မသွားဖို့ လည်း သတိထားသင့်မယ်ထင်တယ်။ အွန်လိုင်းမှာလည်းသာမန်ကဗျာဖတ်ပရိသတ်များပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ဟာ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ထက် like တွေ၊ commentတွေ ၊ share တွေ ပိုရနေတာ အထင်းသားပါ။ ပရိသတ်အကြိုက် လိုက်ရေးနေမယ်ဆိုရင်လည်း တိုးတက်သင့်တာတွေ နောက်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ လူငယ်ကဗျာရေးသူအများစုကတော့ သူတို့ ရှေ့ က တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာသမားတွေရဲ့ အပြုသဘောဆန်တဲ့ comment တွေ ကို ပိုပြီးဆာလောင်တတ်ကြပါတယ်။ တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။
မေး ၉။ မြန်မာကဗျာလောကမှာ ကဗျာချဉ်းကပ်ခံစား ဝေဖန်မှု လုပ်ကြတဲ့အခါ တန်ဖိုးထား နားလည်ခံစားမှု( Appreciation ) နဲ့ ကောင်းဆိုး ဝေဖန် ချဉ်းကပ်သုံးသပ်( Criticize ) လုပ်တာ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားလုံး လုပ်ဆောင်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဆရာမြဇင်၊ ဆရာ မင်းလှညွန့်ကြူး၊ ဆရာမျုိုးသန့်၊ ကိုမင်းခက်ရဲ၊ သူရနီတို့ရဲ့ ကဗျာချဉ်းကပ်မှုတွေက Criticize ဘက်ကို အလေးသာပြီး ဆရာမောင်သာချိုနဲ့ ကို အောင်ခင်မြင့်တို့က Appreciation ဘက်ကို အလေးသာတယ်လို့ ကိုယ် မြင်တယ်။ မြန်မာကဗျာဝေဖန်ရေးအပေါ် ညီလေးတို့ရဲ့ အမြင်။ ပြီးတော့ အခု နှစ်ပိုင်း အွန်လိုင်းမှာ သဘောထားအမြင်မျုိုးစုံနဲ့ လူပြောသူပြောများနေတဲ့ မောင်ဂျိုကာရဲ့ ကဗျာချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့ လူမှုရေး ဝေဖန်ချက်တွေအပေါ် အမြင်။
ဖြေ ၉။ Appreciation ရော Criticize ရော နှစ်ခုစလုံး လိုအပ်ပါတယ်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု တွေ ရှိမှလည်း တိုးတက်မှု တွေ ရှိမှာပါ။ အခုအခြေအနေက ကဗျာဝေဖန်ရေးသမားက ဗေဒါ တစ်ပင်ဆို ကဗျာရေးသားသူက ဘဲအုပ် တစ်ရာ နှစ်ရာ အနေအထားကို ရောက်နေသလိုပဲ။ ဝေဖန်ရေး ဆိုရာမှာလည်း ချစ်သူကို သာစေ မုန်းသူကို နာစေ ကြီးကတော့ လုံးဝကို မရှိသင့်တဲ့ အရာပါ။ သမာသမတ်ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဝေဖန်မှုတွေမလုပ်ပဲ စာပေအနုပညာပေါ်မှာပဲ အကယ်ဒမစ်ကျကျ လုပ်ဆောင်ရင်တော့ ဒါဟာ တကယ်လေးစားစရာပါပဲ။ ဆရာဇော်ဇော်အောင်၊ဆရာဇေယျာလင်း၊ဆရာဇော်ဇော်ထွန်းတို့ ရဲ့ ကဗျာဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေ၊ ဆရာမင်းခက်ရဲ၊ ဆရာသူရနီ၊ ဆရာအောင်ရင်ငြိမ်း စတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ ကဗျာချဉ်းကပ်တွေဟာ
လေ့လာသူလူငယ်တွေအဖို့ အလွန်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ကဗျာအမြင်တွေလည်း တိုးတက်ပွင့်လင်းလာပါလိမ့်တယ်။ မောင်ဂျိုကာ နဲ့ မောင်ချာလီကိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု တွေကို လျော့ပြီး ကဗျာဝေဖန်ရေး တွေ ဆက်လုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
မေး။ ၁၀။ ၂၀၁၀ အလွန် ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာ အခင်းအကျင်းမှာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ၊ အယ်လ်ပီ၊ ကွန်ဆက်ခြူရယ်၊ စမ်းသပ်၊ ဖလာ့ဖ်၊ စကားပြေကဗျာ စသဖြင့် ကဗျာအယူအဆ/ အမျိုးအစားတွေ ရှိနေကြတယ်။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ( Contemporary Poetry) ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရအပေါ်မှာလည်း အမြင်နဲ့ ၀ိဝါဒ အမျိုးမျုိုး ကွဲပြားနေကြတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုဇော်ဇော်ထွန်းကတော့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာလို့ မြန်မာလို မပြောဘဲ Contemporary Poetry လို့ အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုင် သုံးနှုန်းပြောဆိုဖို့ အကြံပေးထားတယ်။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆိုတာ တချိုကဗျာဆရာတွေ ယူဆနေသလို ကဗျာအမျိုးအစားသစ် တစ်ခုလား။ ဒါမှမဟုတ် ၂၀၁၀ အလွန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသစ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ ကဗျာအမျုိုးအစားသစ်တွေကို ခြုံငုံခေါ်ဝေါ်တဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတစ်ခုလား။ ညီလေးတို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနားလည်ထားလဲ။ ညီလေးတို့ အမြင်နဲ့ဆိုရင် ခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုရော ၂၀၁၀ အလွန် ခေတ်ပြိုင်ကဗျာစာရင်းထဲ ထည့်မလား။ ချန်ထားခဲ့ချင်လား။ ပြီးတော့ လာမယ့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု အတွင်း ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာရဲ့ အလားအလာ။ ဘယ်လို ကဗျာအမျိုးအစားတွေ ဆက်လက် ရှင်သန်ရပ်တည် နေနိုင်မယ် ထင်လဲ။ ဘယ်လို ကဗျာ အမျုိုးအစားသစ်တွေ အသစ် ပေါ်ပေါက် ထွန်းကားလာမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထင်ကြေးပေးမလဲ။
ဖြေ ၁၀။ ခေတ်ပြိုင် ကဗျာ ဆိုတာ ခေတ်တစ်ခေတ်တည်းမှာ အပြိုင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကဗျာအမျိုးအစားအကုန်လုံး ကို ခြုံငုံခေါ်ဝေါ်တာ ဖြစ်သလို ခေတ်ပြိုင်ကဗျာအမျိုးအစားအသစ်တွေကို ရည်ညွှန်းတာလည်း ဖြစ်တယ် လို့ အကြမ်းဖျင်းသဘောပေါက်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ ခေတ်ပြိုင်အကြောင်းချင်းရာတွေကို ရေးသားထားတဲ့ကဗျာတွေကိုလည်း ခေတ်ပြိုင်ကဗျာလို့ လည်း ပြောလို့ ရပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကလည်း ခေတ်ပြိုင်အကြောင်းချင်းရာတွေ ရေးသားကြတော့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာထဲ အကျုံးဝင်နေမှာပါပဲ၊ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပဲထားခဲ့ ထားခဲ့ ပင်မရေစီးကြောင်းကတော့သူ့ အလှနဲ့ သူစီးဆင်းနေဦးမှာပါပဲ။
ခေတ်ပေါ်သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ခေတ်ပြိုင်ကဗျာအမျိုးအစားအသစ်တွေလည်း ပေါ်လာစရာ
အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မိခင်မြစ်မ,ဖြစ်တဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုတော့ ယန်ဇီမြစ်လို မခန်းခြောက်စေချင်ပါဘူး။ သူ အနုပညာနဲ့ သူ ၊သူ့ တန်ဖိုးနဲ့ သူ ဆက်လက်စီးဆင်းစေချင်ပါတယ်။ ဆရာဇော်ဇော်ထွန်းရဲ့ အကြံပေးမှုဟာ အလေးအနက်ထား ဝိုင်းစဉ်းစားစရာပါ။ ပညာရပ်ဆန်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် လက်လွှတ်စပယ် မသတ်မှတ်ဝံ့ပါဘူး။ ဘယ်လိုကဗျာအမျိုးအစားတွေ ဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်မလဲ ဆိုတာကတော့ ပြောရခက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ကဗျာလောဘကြီးသူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကဗျာအမျိုးအစားအကုန်လုံးကို ဆက်လက်ရှင်သန် တိုးတက်ရပ်တည်စေချင်ပါတယ်။ တစ်မျိုးတစ်စားတည်း အားကောင်းသွားမယ်ဆို ကဗျာအနုပညာ ဘောင်ကျဉ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ကဗျာဟာ အနက်ရှိုင်းဆုံးနဲ့ အကျယ်ပြန့် ဆုံးပါပဲ။ နောက်ထပ် ဘယ်လို ကဗျာအမျိုးအစား အသစ်တွေ ပေါ်ထွက်မလာတော့ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရင်လည်း ကြိုဆိုဖို့ အသင့်ပါ။ လူငယ်တွေရဲ့ အသံကို ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ ဆရာအောင်ရင်ငြိမ်းကိုလည်း ကျေးဇူးအရမ်းတင်ရှိပါတယ်။
Posted by လင်းလက်တာရာ at 09:55 No comments:
သူတို့ (၇) ယောက်။(၅)ယောက်က မလေးမှာ။ (၂)ယောက်က မြန်မာပြည်မှာ။ကဗျာဆရာဆိုသူတွေမှာ အနေဝေးကြသော်လည်း သွေးနီးသူတွေဖြစ်သည်။ ကိုသျှားကလွဲ၍ ကျန်သူတွေကို
ကျွန်တော် မမြင်ဖူး။သို့သော် facebook ပေါ်မှာတော့ တွေ့သိနေသူတွေ။သူတို့ထဲမှ တစ်ချို့မှာ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင် အတန်အသင့် နေရာရပြီးသူတွေ။ ဘ၀ပေးအခြေအနေအရ ရေခြားမြေခြားတွင် စီးပွားရှာနေကြသော်လည်း အသက်ဓာတ်ကို အနုပညာနှင့် ပူနွေးစေခြင်းဖြင့် အနှစ်သာရရှိရှိ ကုန်လွန်နိုင်သူတွေဖြစ်သည်။ သူတို့သည် လူလတ်ပိုင်းသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်စ လူငယ်တွေဖြစ်သည်။ အရွယ်နှင့်မမျှသော ရင့်ကျက်မှုကို သူတို့ကဗျာများတွင် တွေ့ရသဖြင့် ကျွန်တော် ပီတိဖြစ်မိသည်။ ကျွန်တော်က လက်တွဲကာ လမ်းလျှောက်သင်ပေးရမည့်သူတွေမဟုတ်။ သူတို့သည် ကောင်းကောင်းကဗျာလားမြောက်နေကြောင်း မကြာခင် ဖတ်ရှုရမည့် သူတို့ကဗျာများဟာ သက်သေခံပါလိမ့်မည်။ သူတို့ဝါ သူတို့သမ္ဘာကို မြင်ရလိမ့်မည်။ ကဗျာလက်သင်ကလေးများမဟုတ်ကြ။မလေးရှားသည် မြန်မာလူငယ်ကဗျာဆရာ
များအတွက် ရေခံမြေခံတစ်ခုပေလားမသိ။ လှသန်း မလေးရှားက ပြန်လာသောအခါ ကဗျာတွေ ပိုကောင်းလာတာ တွေ့ရသည်။အတွေ့အကြုံရော အတွေးအမြင်ပါ ရင့်ကျက်လာသည်။ရေခြားမြေခြားတွင် ဘ၀ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ကုန်လွန်ဖို့ သူတို့ ကဗျာကို ရွေးချယ် ခဲ့တာ ကျွန်တော် စိတ်ရင်းနှင့် ချီးမွမ်းမိပါသည်။
သူတို့ကဗျာပုံစံမှာ ယနေ့လူငယ်အများစု အားပြုရေးသားနေသော ခေတ်ပေါ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်အကြား(hybrid)ပုံစံဖြစ်သည်။
ခေတ်ပေါ်ကဗျာ၏အရင်းခံကျသော ပြင်းရှသည့်စိတ်ခံစားမှုနှင့် အားကောင်းသော အလင်္ကာအသုံးကို မစွန့်လွှတ်။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ၏ အလျားလိုက်သဘော စာကြောင်းအစီအစဉ် ပြန့်ကြဲနေသောအကြောင်းအရာနှင့် စိပ်မွှာနေသောအာရုံရုပ်များကိုလည်း ကိုင်စွဲ။ ဤနှစ်ချက် ရောနှောပျော်ဝင်နေသည်ကို သူတို့ကဗျာများတွင် တွေ့ရမည်။ အားလုံးလိုလိုပင် အိုင်တီနည်းပညာနှင့် နီးစပ်သူတွေဖြစ်သဖြင့် အဲဒီအသုံးအနှုန်းတွေကို သူတို့ကဗျာများတွင် တွေ့ရှိရခြင်းမှာလည်း ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ Theme က . . . ဒီနေ့လူငယ်ထုရဲ့အသံလို့ဆိုနိုင်တဲ့၊
တည်ရှိဆဲလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ရာကနေ တအုံနွေးနွေးပေါက်ကွဲနေ တဲ့ဆူပွက်သံစဉ်တွေ။ သူတို့ အဆင်ပြေနေတဲ့ကောင်မလေးတွေ၊ အဆင်မပြေတဲ့ကောင်မလေးတွေ
လည်း (လူငယ်ပီပီ)ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုအခြေအနေ၊အလုပ်အကိုင်၊ အလိုမပြည့်စရာတွေ များတဲ့ဘ၀၊ တစ်ခါတစ်ရံ နာကျည်းဒေါသ၊ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ဓာတ်ကျ။ သူတို့(၇)ယောက်ပေါင်းရေးတဲ့ကဗျာရှည်ထဲက စာပုဒ်တစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။
“ ငါတို့စိတ်ဓာတ်တွေကို အရိုးကြေကြေ အရေခမ်းခမ်း ခေတ်ကြီးတစ်ခုလုံးထဲ
သွေးသံရဲရဲ သွန်ပစ်ခဲ့လိုက်ကြတယ် ”
ဒီကဗျာတွေဟာ ခေတ်ကြီးထဲကို သွန်ချပစ်လိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့သွေးသံရဲရဲတွေပါပဲ။
“ စိတ်ကို ကျည်မထိုးဘဲ ပြောခဲ့မယ် ”
“ လူမှန်ရင် လောကဓံ ခုတ်ရာတစိုစိုနဲ့ ကိုယ့်အလောင်းကိုယ်ထမ်းနေရတဲ့
“ ငါမသေခင် ပန်းတစ်ပွင့် မညှိုးနွမ်းစေရဘူး မင်း မသေခင် မြက်တစ်ရွက်နွမ်းမသွားစေနဲ့ ”
(မင်း/ငါ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဟောဒီကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်သူ့လက်အပ်ထားခဲ့ရမလဲ)ကဗျာမှာ ညီလင်းနိုင်က အဲဒီလိုမှာသည်။
(အမှန်ပြောရရင် ဟောဒီတစ်ညလုံး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် Suicideလုပ်ပစ်လိုက်မိတယ်)ကဗျာမှာတော့...
“ ဆွဲမထုတ်ရသေးတဲ့နောက်ဆုံးဖဲချပ်မှာ အသေခံဗုံးခွဲသမားလည်း ရှိနိုင်သလို သူတော်စင်လည်း ရှိနိုင်တယ်လို့ ငါ ယုံကြည်နေပါရစေ ”
ဟုလောကကို အကောင်းမြင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။
(ပျော်ကျနေတဲ့ မပျော်ရွှင်မှုထဲ ပျော်ဝင်နေတဲ့အရေးအသား)ကဗျာမှာတော့...
“ သာတူညီမျှဟာ တစ်ဖက်တည်းကိုပဲ စောင်းပြီးနင်းနေတယ် လီဗာပြင်းပြင်း
မတရားမှုဟာ တစ်ချက်တည်းနဲ့ ကျင်းဝင်သွားတယ် ”
လို့ အတိအလင်း ကြေညာလိုက်သလို . . .
“ ကိုယ့်ယာခင်းလေးမှာ ပိုးမထိုးတဲ့ရာသီဥတု ဘယ်နှပင် အမှန်တရားစိမ်းစိမ်း ဘယ်နှခင်း ကောင်းကင်ကြီးကို မိုးချင်တိုင်းမိုးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေက ကျစ်လိုက်တိုင်း ခိုင်တဲ့ကြိုး ”
ဟု ဘ၀ကို ဆန်းစစ်ပြထားတာ တွေ့ရသည်။ သူ့ကဗျာတွေထဲက ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကဗျာမှာ (ဘာသာစကားသစ်ပင်မှာ လူတို့ အလွယ်တကူမဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့အသီးအပွင့်တွေ) ဖြစ်သည်။
ရွှေကိုယ်နတ်ရဲ့ကဗျာတွေကတော့ စမ်းသပ်ထားသော ပုံစံခပ်ဆန်းဆန်းတွေဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရသည်။ သူ့ကဗျာတွေက တစ်ကြောင်းတစ်ပါဒစီထုတ်ပြတာထက် တစ်ပုဒ်လုံးဖတ်မှ ကဗျာဆရာပေးသော ရသကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော သူ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပါ။
(ဒါမှမဟုတ် ဒီစာသားအဆောက်အအုံကို ဒေါင်းလော့လုပ် နှစ်သက်ရာ deviceတစ်မျိုးမျိုးနှင့်
ရဲရင့်လမင်းကတော့ ရိုးရိုးစင်းစင်းရေးဟန်နှင့် လှလှပပတွေးစရာတွေ ပေးတတ်
(လူဟာ လူယောင်ဆောင်ပြီး လူ့အဖြစ်ကို ရလာတာ)ကပင် စဉ်းစားစရာ။
“ ခန္ဓာတစ်ခုချင်းစီဟာ စက်ရုံတွေသာဖြစ်ရင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရယ်သံတွေပဲ ထုတ်လုပ်နေမှာပေါ့ ” ဆိုတာ သူ့လောကအမြင်ရဲ့တစ်စိပ်တစ်ဒေသ။
(ကကြီးက ဗျာလို့ထူးတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကမ္ဘာကြီးက အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့) ကဗျာနှင့် (ပန်းစိုက်ခြင်းအနုပညာ/လူတစ်ကောင်ရဲ့အထူးပြုလုပ်ချက်/အပေါစားအပ်ဖျားပေါ်ကခေတ်ကြွင်းခေတ်ကျန်ဗိုင်းရပ်စ်များ) ကဗျာတို့မှာ စွဲမက်စရာဟု ဆိုချင်ပါသည်။
(ငါတို့ပြောရင် သီချင်း ငါတို့ရေးရင် ကဗျာ ငါတို့ဟာ မင်းသားယောင်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသားတွေ)
ကဗျာမှာ FBတွင် ဖတ်ပြီးသားဖြစ်သည်။အစပုဒ်ဖြစ်သော.....
“ ထုံးစံအတိုင်း နင်တို့ကို အိမ်စောင့်နတ်က နှင်ထုတ်ထားတာလားနဲ့ စရင်
ဘယ်သူ့စီးပွားရေး တုတ်နဲ့ထိုးချနေလို့လဲအမေရဲ့နဲ့ ဆုံးမယ်
အိမ်မှာဆိုရင် အိနြေ္ဒမရ ဟိုရွရွ ဒီရွရွ
လမ်းပေါ်မှာဆိုရင် လန်ထွက်နေအောင် လန်းကြပေါ့ လူငယ် ”
ဆိုတာသည် ခေတ်လူငယ်တို့ဘ၀ကို အပီအပြင် မီးမောင်းထိုးပြသလို မှတ်ရသည်။(ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ လူကြီးနဲ့လူငယ်အကြားမှ နားလည်မှုအလွဲများ သို့မဟုတ် မျိုးဆက်
(တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ် ဘာဖြစ်နေတယ် ညာဖြစ်နေတယ် ကိုသျှားဖြစ်ချင်တယ်)ကဗျာသည် သူ့ဘ၀
ဖြစ်တည်မှု ကြေညာစာတမ်းနဲ့ တူသည်။
(စကားလုံးမဟုတ်တဲ့ဝိုင်ယာကြိုးထဲကလူတွေ ဂျွန်စတိန်းဘတ်ဖတ်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်တစ်မျိုး အမည်မဲ့ အဓိပ္ပာယ်များကို
ဆေးကြောခြင်း)တွင်မူ သူ့ရဲ့အသစ်ထွင်လိုမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုအနုပညာ၌ ပါးနပ်ပုံကို တွေ့ရသည်။
“ ခေတ်ပေါ်လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာ လှုပ်မသောက်မိတဲ့ဆေးပုလင်းပေါ့
အခုတော့ မင်းခေါင်းနဲ့ငါ့ပုခုံးလည်း ကျွန်းကိုင်းမမှီနိုင်တော့ဘူး ”
ဤကဲ့သို့ တိုတိုရှင်းရှင်းထိထိမိမိလေးနက်အောင် ရေးတတ်ပြောတတ်သူမှာ ကဗျာဆရာ ဆူးရဲဖြစ်သည်။(ဟိုတွေးဒီတွေးကလည်း ဟိုသွေးဒီသွေးလို အမျိုးအစားအလိုက်...ကဗျာမှ)
သူ့ကဗျာများမှာ သူ့ကလောင်နာမည်လိုပင် စူးစူးရဲရဲရှိသည်။သို့မဟုတ် ဆူးဆူးရဲရဲရှိသည်။
ဥပမာ (ကျစိမ့်တစ်ခွက်ရယ် စိတ်ကျတစ်ညနေရယ် စိတ္တဇတွေ စိမ့်ကျနေတဲ့စိတ်ဆဲလ်တွေရယ်
“ လူတွေဟာ အူတွေလို ရှုပ်ထွေးရင်း ဗိုက်ဟောင်းလောင်းပွင့်နေတာမျိုး
ကိုယ်နားမလည်တဲ့သီချင်းဟာ ကိုယ့်နားထင်ကို ကျည်ဆံလို ဖောက်ဝင်ပြီး
အတွေးကို သွေးသွင်းရတာမျိုး ”
သူသည် ဝေါဟာရများကို ဘာသာဗေဒကဗျာများကဲ့သလို့ တစ်ခါတစ်ရံ ကစားတတ်သူဖြစ်သည်။ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိုယ့်အရေးအသားဟာ ကိုယ့်အသွေးအသားအာရုံကိုက်ခဲမှုအတိုင်း)ဆိုတဲ့ ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပါ။
သူ့ရဲ့ (အစပိုင်းက စထားတဲ့အပိုင်းအစတွေဟာ ကောက်သင်းကောက်သလို အလေအလွင့်) ကဗျာမှာ အဆင့်မှီခေတ်ပြိုင်ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟု ဆိုလျှင် ငြင်းမည့်သူနည်းမည်ထင်ပါသည်။ဒီကဗျာအမည်ဖြင့်
ပင် (၂)ပုဒ်ကို ဆက်ရေးခဲ့ပါသည်။
“ ကျည်ဆံတစ်တောင့်ကနေ ပန်းပွင့်သွားတယ် သေပန်းပေါ့သူငယ်ချင်း
ဖရုဿဝါစာတွေ တစ်လှေကြီးကို လက်မှတ်တိတိကျကျနဲ့ စီးမိတော့မယ် ”
အဲသလို မကျေမချမ်းလေသံပေးတတ်သူ ကဗျာဆရာ ကျော်ဦး(လှိုင်)ဖြစ်သည်။( မင်းဟာ မင်း
ရွတ်/ဆိုမဲ့ ကဗျာ/သီချင်း ကဗျာမှ...)
သူသည်(ကိုယ်ချိုးထားတဲ့နံရိုးဟာ ကိုယ့်ကို ပြန်ခြောက်တဲ့ည)ကဗျာလို လူငယ်ဘ၀ကို ထင်ဟပ် သည့် ကဗျာမျိုးတွေလည်း ရဲရဲရေးတတ်သည်။ သူသည် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတို့ဘ၀ကိုလည်း သိမြင်စာနာတတ်သူဖြစ်သည်။
(ခင်ဗျားတို့ကိုယ် ခင်ဗျားတို့စားဖို့ သုံးမိနစ်ပဲ စောင့်ပါ)ကဗျာ....
(ကိုယ့်ကဗျာမှာ ကိုယ့်နာမည်တပ်လိုက်တဲ့အခါ မိုက်တွင်းပိုနက်သွားတယ်)
ကဗျာများတွင်မူ လောကအမြင်နှင့်သူ့ဖောက်ခွဲမှုကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
လူငယ်(၇)ယောက်လုံး၏ကဗျာများမှာ ရဲရင့်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သည်။ ခေတ်လူငယ်ထု၏ ဘ၀ဒဿနကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ဒီလိုတိုးတက်သော လူငယ်ကဗျာဆရာလေးတွေ အဆက်မပြတ် ဖြစ်ထွန်းနေတာမြင်ရသဖြင့် ကျွန်တော် ဘ၀င်ကျသွားသောအရာတစ်ခုရှိကြောင်း နောက်ဆုံး ပြောလိုပါသည်။ ထိုအချက်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာကဗျာလောကကြီး ဘယ်သောအခါမှ
အားလုံးကို လေးစားလျှက် . . .
Posted by လင်းလက်တာရာ at 02:06 No comments:
Labels: ခေတ်ပြိုင် #7ကဗျာစာအုပ် ဆရာသစ္စာနီ အမှာစာ
လင်းလက်တာရာ စကားလုံး မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ် ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စူးရဲကျယ်ပြန့်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ထွင်းဖောက်ကြည့်မြင်သူ
ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စူးရဲကျယ်ပြန့်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ထွင်းဖောက်ကြည့်မြင်သူ
လင်းလက်တာရာ၊အသက် (၂၅ )၊ ရေလယ်ကျောက်တန်းဇာတိ၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်က မြန်မာစာအထူးပြုနဲ့ ဘီအေဘွဲ့ရ၊ ပထမဆုံး ပုံနှိပ်စာမူ ရုပ်ရှင်အမြုတေမဂဇင်း ၂၀၀၆၊ ဟာသ၀တ္ထုတိုတွေလည်း ရေးခဲ့ဖူး၊ ကဗျာဆရာ လူခါး၊ ရာဇာမျိုး( အင်းကုန်း) တို့နဲ့အတူ " ပင်လယ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ရွက်တွေ " ကဗျာစာအုပ်( ၂၀၁၂) ၊ ကဗျာဆရာမောင်ရေချမ်း၊ စစ်နိုင်၊ လူခါး၊ လင်းဝေအိမ်၊ ထွန်းလင်းသစ်( ကန့်ဘလူ)၊ အဂလင်း၊ ဆူးရဲ တို့နဲ့အတူ " အက္ခရာလမ်း" ကဗျာစာအုပ်( ၂၀၁၃) တွေ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးတယ်။
လင်းလက်တာရာဟာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာသင်ရိုးကို ကျေညက်ခဲ့သူ လူငယ်ကဗျာဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ကဗျာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းသူ။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကနေ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ ယဉ်ကျေးမှု အသစ်ဆီ အရွေ့မှာ Expressive, Experimental & Prose Neomodern ကဗျာတွေ ပြောင်းလဲ စမ်းသပ်ရေးသားလာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကဗျာအယူအဆရေးရာ ဗဟုခေတ်ကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာအခင်းအကျင်းထဲက L.P, Neomodern, Conceptual, Experimental ကဗျာအယူအဆတွေ အားလုံးကို ထိတွေ့လေ့လာနေကြရပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးသက်ရောက်မှု အနေနဲ့ လင်းလက်တာရာရဲ့ ကဗျာစာသားတွေမှာ ဘာသာစကားကဗျာ( မြန်မာ) ရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ Language Game ပြုလုပ်မှု တချို့ပါဝင်ပေမဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ချိုးဖျက်/ ရပ်ဆိုင်း/ ကမောက်ကမဖြစ်သွားစေတဲ့အထိ နည်းစနစ်ပိုင်း အစွန်းမရောက်ဘဲ Poetic Technique တစ်ခုအဖြစ် စမ်းသပ်ယူငင်သုံးစွဲတာမျိုးသာ ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။
လင်းလက်တာရာရဲ့ ကဗျာစာသားတွေမှာ အတ္ထာလင်္ကာရ( အနက်တန်ဆာဆင်မှု) ပိုင်းအရ ကဗျာဘာသာစကား အလေးထား သုံးစွဲ၊ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံ ရောနှောရေးဖွဲ့၊ ပုဂလိက အာရုံခံစားမှုထက် ခေတ်စနစ်နဲ့ လူမှုဝန်းကျင်အပေါ် သဘောထားအမြင်တွေကို ဦးစားပေး၊ နီယိုမော်ဒန်ရဲ့ Fibrous Lines & Text အများစု၊ Fragments အနည်းငယ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာ အထင်အရှား မြင်ရပါတယ်။ သူ့ ကဗျာတွေမှာ သဒ္ဒါလင်္ကာရ( အသံတန်ဆာဆင်မှု) ပိုင်းအရ နောက်ထပ် ထင်ရှားမြင်သာတဲ့ အချက်တစ်ခုက အသံနိမ့်မြင့်စီးဆင်းမှု (Rhythm ) အားကောင်းပြီး စကားလုံးနဲ့ ပါဒ/ ၀ါကျ အဖြတ်အတောက်တွေ တိကျသပ်ရပ်တာပါပဲ။ ကဗျာဝါကျ အဆုံးသတ်တွေမှာ လုံးချင်းကြိယာ၊ အငြင်းစကား၊ အသံပြတ်တွေနဲ့ ရပ်တန့်ထားပြီး ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံ မျိုးစုံ၊ လေယူလေသိမ်းမျိုးစုံ ဆော့ကစားထားတဲ့အတွက် အတ္ထာလင်္ကာရ ရော သဒ္ဒါလင်္ကာရပါ ရိုးအီ ငြီးငွေ့မှု မဖြစ်စေဘဲ သွက်လက်လန်းဆန်းနေတာ သတိပြုမိပါတယ်။
သူ့ကဗျာတွေရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေမှာ အွန်လိုင်းယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံတကာ အခင်းအကျင်း၊ ရုပ်ဝတ္ထု ငွေကြေးနဲ့ နည်းပညာရဲ့ ကျေးကျွန် ဖြစ်နေရတဲ့ ခေတ်သစ်လူသားရဲ့ လက်ရှိ အနေအထား၊ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်ပစ္စည်း အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုထဲ နစ်မြုပ်နေတဲ့ လူသားရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်း၊ သမားရိုးကျ အစဉ်အလာ အသိအမြင်တွေကို လူငယ်ဆန်ဆန် တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်း၊ အပေါ်ယံအရေပြားဆန်တဲ့ ခေတ်သစ်လူမှုဆက်ဆံရေး ပုံစံများ၊ ခေတ်ပေါ်မြို့ပြမြင်ကွင်းနဲ့ မြို့ပြအာရုံခံစားမှု၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ လူသားဆန်မှု၊ စက်ရုပ်ဆန်မှုနဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချိုးပျက်မှုတွေနဲ့ အာရုံအဆက်အစပ် ပြတ်တောက်မှုများ၊ အမှန်တရားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မသေချာ မရေရာမှု စသဖြင့် ခေတ်သစ်အကြောင်းအရာပေါင်းစုံ ပါဝင်တာ ကဗျာဖတ်သူတွေလည်း သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။
လင်းလက်တာရာဟာ ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူမှုအလေ့အကျင့်တွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုတွေကို စူးရဲကျယ်ပြန့်တဲ့ ကဗျာမျက်လုံးနဲ့ ထွင်းဖောက်ကြည့်မြင်ပြီး ကဗျာဘာသာစကားကျည်ဆံတွေ အပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ စကားလုံးမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်တစ်လက်နဲ့ ခေတ်စနစ်နဲ့ လူမှုဝန်းကျင်ကို အဆက်မပြတ် တဒိုင်းဒိုင်း မွှေ့ယမ်း ပစ်ခတ်နေတဲ့ လူငယ်ကဗျာဆရာတစ်ယောက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဘရိတ်ပေါက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်၊ ငွေရေ မင်းချုပ်ကိုင်ခြယ်လှယ်လို့ ၀ရင်လည်း လူ့ယဉ်ကျေးမှုကွန်ရက်ကြီးထဲကနေ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားပါတော့၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားကို မူကြိုကျောင်းသားလေးဆီက သွားသင်လိုက်ဦး၊ လုပ်ပြုံးကြီးဟာ လူအုပ်ထဲ အတင်းကာရော မောင်းဝင်လာပြန်၊ လူမှုဆက်ဆံရေး Live Show မှာ မုသားဟာ နားဝင်အချိုဆုံးသီချင်း၊ မြို့ကြီးပြကြီးဟာ မေတ္တာတရားကို ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားတယ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ အ၀တ်ဗလာနဲ့ လမ်းသလားနေတာ လန်းသလား၊ လူသားချင်း တန်းတူညီမှုဟာ အနည်းငယ်ဖောင်းပွလာတာက လွဲရင် ပိန်ရှုံ့နေတုန်းပဲ၊ ဟေ့ အချစ် မင်းလည်း စစ်အစိုးရ မလုပ်နဲ့ ငါလည်း အစွန်းရောက်ပြည်သူ မလုပ်ဘူး၊ ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ အမှန်တရားဟာ မနက်ဖြန်အတွက် မသေချာတော့ဘူးလား၊ ကာလယန္တရားကြီးက Women's Voices ကို အထူးတလည် လိုအပ်နေပါတယ်၊ အကျပ်အတည်းက လူမှုဇုန်ထဲကနေ ကုပ်ဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ် ကျွန်တော့်ကို/ ခင်ဗျားကို၊ VIP ၀ိုင်းကြီးဆီက အပုပ်နံ့ ရတယ်၊ ဦးနှောက်တွင်း ကဗျာသွေးယိုစီးမှု၊ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ နယ်ရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကအစ အဆိပ်ပြင်းတယ်၊ လူသားရဲ့ ဘတ္ထရီဒေါင်းနေတဲ့ နှလုံးသားကို စာအုပ်တွေနဲ့ ချာဂျင်ပြန်သွင်း၊ Viber ထဲမှာ ချက်တ်ဘောက်ခ်စ်ထဲမှာ အပူလှိုင်းတွေက Vibration လို တုန်ခါ၊ စက်တွေလို Run စက်တွေနဲ့ Run ဖော်မြူလာဝမ်းလို Run ၊ ရင်းဂစ် ၃၀၀ တန် ဖုန်းတစ်လုံးက အပျိုရည်ညလေးကို မြိုးမြိုးမြက်မြက် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ပစ်လိုက်တယ် စသဖြင့်။
လင်းလက်တာရာဟာ ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကျယ်ပြန်တဲ့ အမြင်နဲ့ ထွင်းဖောက်ကြည့်မြင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားတဲ့ လူငယ်ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ဆိုတာ အကောင်းဆုံး သက်သေပြနေတဲ့ စာသားတွေ။ သူ့ဦးနှောက်/ နှလုံးသား/ လက်ထဲက စကားလုံးမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ရဲ့ ပြောင်းဝကနေ ကျည်ဆံတွေ အဆက်မပြတ် တဒိုင်းဒိုင်း။
ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာလောကထဲမှာ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ၀ါရင့်ကဗျာဆရာတွေ အပြောများနေတဲ့ မခိုင်လုံတဲ့ ဆင်ခြေစကားတစ်ခု ရှိပါတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက် စာပေစိစစ်ရေးမူဝါဒတွေ တင်းကြပ်ထားတဲ့ အမှောင်ခေတ်ကာလတွေတုန်းက စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး၊ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အမှန်တရား ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရေး အကြောင်းအရာတွေ ရေးစရာ အမြောက်အမြား ရှိခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၁၀ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာတော့ ဘာ အကြောင်းအရာ ရေးလို့ ရေးရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်နေရတယ်တဲ့။ အဲဒီလို Unreasonable Reason တွေ ပေးနေသူတွေအတွက် လင်းလက်တာရာရဲ့ ကဗျာအကြောင်းအရာပေါင်းစုံက ၀ါရင့်ကဗျာဆရာတွေကို Indirect Lecture တွေ ပေးနေသလိုပါပဲ။ ခေတ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြည့်မြင်နိုင်သူ အတွက် အကြောင်းအရာ မရှား၊ သင်ခန်းစာ ယူတတ်သူတွေအတွက် သင်ခန်းစာ ယူချင်စရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လင်းလက်တာရာရဲ့ " လူသားဟာ စက်ရုပ်နဲ့ သားစပ်ထားတဲ့ အသားစိုင်ကြီး.... " ကဗျာမှာ ခေါင်းစဉ်ရောအတွင်းစာသားတွေကိုပါ ပြောင်းပြန်လှန် ပြန်ရေးထားတာ သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ ကဗျာဆရာရဲ့ စိတ်ကူးဆန်းသစ်မှုနဲ့ စမ်းသပ်ရေးသားမှုကို အသိအမှတ်ပြုမိပေမဲ့ အကြောင်းအရာပိုင်းအရ မလိုအပ်ဘဲ ပြောင်းပြန်ထပ်ကျော့ထားတာမျိုး ဖြစ်နေလို့ ကဗျာဖွဲ့စည်းတင်ပြပုံ နည်းစနစ်ပိုင်း အားနည်းသလို ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ဒီလို ဖွဲ့စည်းတင်ပြပုံမျိုးက သံသရာလည်ခြင်း သဘော၊ ပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်း သဘောတွေ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးနဲ့မှသာ လိုက်ဖက်ဆီလျော်မှု ရှိမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
" ဖေဖော်ဝါရီရဲ့ ရှိုက်သံဟာ ဇန်န၀ါရီ အဆက်ဆက် တုန်ခါ.... " ကဗျာမှာ ပုံသဏ္ဍာန်ပိုင်းအရ ကဗျာစာသားဖွဲ့စည်းပုံ စမ်းသပ်/ ဆန်းသစ်ထားတာကတော့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဟာမိုနီဖြစ်နေတဲ့အတွက် စမ်းသပ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်။
လင်းလက်တာရာရဲ့ ကဗျာတွေက နီယိုမော်ဒန်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့၊ ချည်မျှင်ဆန်တဲ့ လိုင်း/ စာသား ( Fibrous Line & Text ) တွေ အမြောက်အမြား၊ ပို့စ်မော်ဒန်က စာသားအပိုင်းအစ ( Fragments ) အနည်းငယ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလို့ စကားပြေကဗျာဆန်တယ်လို့ ယေဘုယျ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Prose Poetry ရဲ့ ဇာတ်လမ်းသဘော၊ Pomo Sensibility နဲ့ စကားပြေဆန်တဲ့ အရသာမျိုး မထင်ရှားဘဲ နီယိုမော်ဒန်နောက်ခံအယူအဆနဲ့ Expressive & Prose Neomodern ကဗျာရသမျိုး ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်။
အဲဒီလို ကဗျာနောက်ခံအယူအဆ၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာ၊ တက္ကနစ်၊ ဘာသာစကားအမြင်တွေကြောင့်ပဲ လင်းလက်တာရာကို L.P အရိပ်အငွေ့ အနည်းငယ်စွန်းထင်းနေတဲ့ Expressive & Prose Neomodern ကဗျာဆရာလို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by လင်းလက်တာရာ at 02:04 No comments:
အဲဒီသန္ဓေသားကို တာဝန်အပြည့်အဝယူတယ် ကဗျာကိုတော့ ကွန်ဒုံးလာမစွပ်နဲ့ 
စားတယ်။ 'တီ' အကြောင်းတွေးရင်း 'ဆား' နဲ့ 'ငါးမျှား' တွေ အသီးသီး ကပ်ပါလာသလိုမျိုး။
နှလုံးသားနဲ့ အာရုံကြောကို ပျက်စီးယို့ ယွင်းစေတဲ့ အာဟာရတွေကို စားမိပြန်တယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက 'အိမ်စာ' တွေနဲ့ ကစား။ ကြီးလာတော့ သတ်ကွင်းထဲ 'အိမ်ဆာ' တွေနဲ့ ။
လောကဟာ လောကသန့်သန့်မနေဘူး။ 'ဓံ' နဲ့ ပါ ပေါင်းပြီး ကမြင်းကြော ထနေတယ်။
ယုံကြည်မှုဆိုတာ အချိန်မရွေး ထပေါက်သွားနိုင်တဲ့ မင်္ဂလာဦးအိပ်ခန်းထဲက ပူဖောင်းလေးတွေပါပဲ အချစ်ရယ်။
သမံတလင်းပေါ်က ကြေကွဲအစအနတွေဟာ အခွံမာဇာတ်လမ်း အကြီးကြီးတွေ။
သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ နံနက်ခင်း နှင်းထူထူထဲကနေ ပြုတ်ထွက်နေတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မျက်ရည်ကြီးငယ်များ။
စကြာဝဠာထဲမှာ 'ငါ' ကို ထည့်မလား။ စကြာငါဝဠာ။
စကြာဝဠာထဲမှာ 'ကဗျာ' ကို ထည့်မလား။ စကြာကဗျာဝဠာ။
ကဗျာထဲမှာ 'ငါ' ကို ထည့်မလား။ ကငါဗျာ။
'ငါ' နဲ့ 'ကဗျာ' နဲ့ ငြင်းခုန်ကြပေါ့။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ ထိုးနက်ကြပေါ့။
မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ပိုင်းကြပေါ့။
ပေါ့ တယ် ဆိုရင်လည်း ပထမဆုံးလိုင်းက ဆားရယ် ငါးမျှားရယ် တီတွေရယ် ပစ်ထည့်လိုက်ကြပေါ့။
စစ်အစိုးရစော်နံတဲ့ သစ်သီးထဲမှာ အရည် မရွှန်းပါရစေနှင့်။
ကွင်းစကွင်းပိတ်တွေဟာ လူသေရဲ့နာမည်ကို ဘာ့ကြောင့် အကျဉ်းချထားရသလဲ။
မေးခွန်းတောင်ယာမှာ မီးလောင်နေတဲ့ အဖြေတွေ။
ကဗျာထဲမှာ ဇာတ်လိုက်ဟာ သေသွားတယ်။ ဇာတ်လမ်းဟာ သေသွားတယ်။
ဇာတ်ဆရာဟာ သေသွားတယ်။ စာသားချည်းသက်သက် လွတ်မြောက်ရှင်သန်သွားပါသလား။
( အပေါ်က ကွင်းစကွင်းပိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ပြန်ထည့်မယ် မီးလောင်နေတဲ့ အဖြေတွေ ဖြည့်ချင်ဖြည့်လို့ ရတယ်)
ရွာရိုးကိုးပေါက်ထဲ ဖြာကျခဲ့ပြီးသော ငယ်ဘဝရဲ့ လရောင်။ သိမှုဟာ ကျောက်သားထဲ တိုးဝင်
ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲ ကျောက်စ တွေ ကွဲထွက်ပွင့်ဝေစေတယ်။ အေးစက်နေတဲ့ အဲကွန်းအောက်
အိုက်စပ်နေတဲ့ စိတ်များ။ လေကောင်းလေသန့် ကို ဘယ်နှကြိမ်မြောက် ပစ်မှားမိပြီလဲ။
မိမိအနေနှင့်ကတော့ ဘာသာစကားရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း လစ်လျူမရှုချင်။
မိမိအနေနှင့်ကတော့ ခေတ်စနစ်နဲ့ လူမှုဝန်းကျင် မျက်မှောက်အကြောင်းချင်းရာတွေကိုလည်း မျက်ကွယ်မပြုချင်။
မိမိအနေနှင့်ကတော့ “ငါ”ဗဟိုပြု “အား”ကြီးလွန်းမုန်တိုင်းတွေကိုလည်း ငြီးငွေ့ ချင်ချင်။
မိမိအနေနှင့်ကတော့ သိပ်သည်းထူထဲလွန်း ပါးလျပြေလျော့လွန်း အစွန်းရောက်မှုတွေကိုလည်း အစွန်းမရောက်ချင်။
အဲ ဒီ 'မိမိ' ဟာ ကျွန်တော် ဖြစ်နိုင်သလို ခင်ဗျားဖြစ်နိုင်သလိုသူငါကျားမလည်း ဖြစ်နိုင်သလို
အဲဒီ 'မိမိ' ဟာ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အသာထား ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း အထိ ခံပါ့မလားလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျွန်တော် ဆီးဂိမ်းအမီ အိမ်ပြန်မည်။
၂၀၁၅ မှာ တရားမျှတတဲ့ မဲတစ်မဲ အမှန်တကယ် ပေးခွင့် ရချင်သည်။
ဘာတုပါဟတ်၊ ဂျိုဟိုး၊ မလေးရှား။
Posted by လင်းလက်တာရာ at 02:02 1 comment:
အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခြင်း အနုပညာ
လူ့ ဘဝဟာ တဝီဝီအော်မြည်နေတဲ့ စက်ယန္တရားကြီး
လူထုကြီးဟာ သမိုင်းစာအုပ်ထဲက မှုန်ဝါးဝါးဓါတ်ပုံထဲမှာ ' ရှေ့ သို့ ၊ ရှေ့ သို့ ' ညံတုန်းပဲ
ငါတို့ ဟာ လူ့ အသိအမြင်ကို ပြောင်းလဲပစ်မယ့် Manequin တွေ
ငါတို့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေပေးလိုက်ရတယ်
ငါတို့ ပြန်ရှင်သန်ထမြောက်လာကြတယ်၊ ရောဂါစိမ်းတွေ အများကြီးပဲ
ဦးနှောက်က ငွေစက္ကူအနံ့ ထွက်နေတယ်၊ ရန်ကုန် ၊ မတ်တပ်ရပ်ဖို့ တောင် မလွတ်တဲ့ နယ်မြေ
သမိုင်း ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်တွေဟာ ဂလိုဘယ်ခေတ်မှာ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုတွေသာ
လူ့ အဖြစ်ဟာ ဖက်ရှင်တွေအောက်မှာ အရည်ပျော်/ပျောက်ဆုံး/လျှောထွက်လို့ 
စာသားဟောင်းတွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ခေတ်ပြိုင်ကုမ္ပဏီလီမီတက်
အချစ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံ၊ အချစ်ဆိုတာ မြေအိုးမြီးရှည်၊ အွန်လိုင်းပေါ် အမြန်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စာသား
ဈေးအမြင့်ဆုံးရသူလေးရဲ့ အပျိုမြှေး၊ တက်သစ်စ ဗွီဒီယိုမင်းသမီးလေးရဲ့ မပြုမပြင် ရင်သားပျော့ပျော့
အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ ၂၁ ရာစုမှာ ဖတ်လို့ အကောင်းဆုံးသရော်စာပဲ
ငါ့ CM စာသားက Love isanick-name of sex
စိတ်ထဲက ဆံပင်ဖြူတွေ ငယ်မူငယ်သွေး ဆိုးလိုက်မယ်
၁၆နှစ်သမီး ကိုယ်ကျင့်တရားဟာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အကျပ်အတည်းမှာ သေဆုံးသွား
လမ်းသစ်ဖောက်ရာတွင် ချိုင့်ကြီးဖို့ ရန် မိမိတို့ အားထည့်သွင်းစေ
စကားလုံးတစ်လုံးဟာ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ရွစိရွစိနဲ့ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ 'လူ့ ဘဝ'
ငါ့ထဲမြည်ဟည်းနေတဲ့ အသံစိမ်းကြီးဟာ ကပ်တစ်ခုရဲ့ ရှေ့ ပြေးလား
လူတွေဟာ မိတ္တူကူးစက်ထဲက အဆက်မပြတ်ထွက်ကျလာနေတယ်
စာအုပ်အသစ်လေးဟာ တိုင်းပြည်အသစ်ကလေးလိုပဲ ပုံနှိပ်စက်အနံ့ 
ငါတို့ အားလုံးဟာ ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ
အင်အားကြီး အာဏာကြီး ပုရိသတစ်ယောက်ကို ဗဟိုပြု၍ တောက်လျှောက်ပဲ နှစ် ၃၀၊ ၄၀ ၊ ၅၀
ကြည့်စမ်း သူတို့ အတွင်းစိတ်ဟာ ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးနဲ့ 
'ကုန်သွယ်လယ်ယာ' ကလည်း ဓမ္မရုံကြီးပဲ ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့
လူတွေမှာ အပေါစားဟာသကြိုက်တဲ့ ဥာဉ်နဲ့ ပိုက်ဆံကို ဘုရားသခင်ထင်တဲ့ ဦးနှောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်
ကလော်ဆဲစရာတွေရဲ့ 'အရှိတရား'ဟာ ဆွဲဆန့် လို့ ရတဲ့ ကြက်ပေါင်စေး
ပုဆိန်ရိုးဟာ ဘာသားလဲ ဓါးသွားထက် ဖားသားထက်တယ်
ဟေး လူငယ်! ပျော့မနေနဲ့ ပြဲမနေနဲ့ ခင်ဗျား ပါရဒိုင်း အမြန်ချိန်း
မီးအိမ်နဲ့ နေဝင်မီးငြိမ်းအမိန့် အောက်မှာ စွန့် စားရှာရသလို
ဆူနာမီ ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ တစ္ဆေသင်္ဘောဟာ ကိုယ်တို့ ကို စိုက်ကြည့်လို့ 
လူ့ အဖြစ်ဟာ A ကိုက်နေသလိုပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသလား အသက်ဇီဝနဲ့ လဲပါ့မယ်
သောက်လက်စအရက်နဲ့ 'အမှန်တရား'ကို ပက်လိုက်ဖို့ခွက်ကိုပစ်ခွဲဖို့ 
ပြဿနာပဲ ကိုယ်ခန္ဓာထဲ သုက်ပိုးတွေ ပျစ်ခဲနေပြီ
စိတ်ဟာ စွဲသုံးရတဲ့ အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေး
ငါ့လိပ်စာကဒ်၊ ငါ့ User name ၊ ငါ့ Password ၊ ငါ့လျှို့ ဝှက်ချက်
တရုတ်ကြွေခွက်ဟာလည်း ဒူးရွှန့် ရဲ့ ရေပန်းပဲလို့ ပန်းလိုက်တယ်
အပေါစားအောင်မြင်မှုကို အသားတုံးတစ်တုံးလိုထိုးမဟပ်မိစေဖို့ 
ငွေဟာ မကောင်းမှုရဲ့ ဇာစ်မြစ်၊ ဒုစရိုက်ရဲ့ မိခင်
စစ်ဖြစ်ရင် အရင်ဆုံး သေကြေပျက်စီးရတာ အမှန်တရားပဲ
လူ့ အဖွဲ့ အစည်း သွေးသစ်လဲသင့်တာ အနှစ် နှစ်ဆယ်
အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်မှာ စွန်းထင်းနေတဲ့ အမှတ်ရမှု
လေဟာနယ်ထဲ ပေါလောမျောနေတဲ့ နေ့ စဉ်လူမှုဘဝဇာတ်လမ်း
ငါဟာ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြဖို့ ဆူးချွန်မေးခွန်းဖြစ်သလား
လူ့ အဖြစ်ဆီ ရှပ်တိုက်ပြေးဝင်လာတဲ့ လောကဓံတရား
လူဆိုတာ ကိုယ့်အတ္တကိုယ် တည်ဆောက်နေကြတဲ့ ဗိသုကာတွေ
ခြင်ထောင်ထဲမှာ မင်းခွေအိပ်နေတာ သမိုင်းခေတ်ကြီး အလုံးလိုက်ပဲ
ငါတို့ ဘဝတွေကောင်းစားဖို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနေကြတယ်
အနုပညာအတုတွေ သားလျှောပါစေ အနုပညာအဟောင်းတွေ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပါစေ
ခြုံမပြောနဲ့ တောတောင် မရှိတော့ဘူး မျိုးသုဉ်းသွားကြပြီ
လောင်စာခန်းတော့မယ့် ယန္တရားကြီး အသံကုန်အော်ဟစ်
အတွင်းလှိုက်စားနေတဲ့ ပြည်ပုပ်နာတွေ အော်ဂလီဆန်ဆန် အမူအကျင့်တွေ
မသိလိုက်ခင်မှာ မြစ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ ဈေးကွက်မှာ မြင့်တက်လာ
'ပေါ့ပါးတဲ့ ဝတ်စုံတစ်စုံ' မြို့ထဲ ထွက်သွားတယ်
'လေးလံတဲ့ ဝတ်စုံတစ်စုံ' မြို့ထဲက ပြန်လာတယ်
ငါ့တစ်ခုတည်းသော ကိုယ်ခန္ဓာကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သုံးစွဲမယ်၊ ငါဟာ နိုင်ငံတော် အလံလိုပဲ ရောင်စုံနဲ့ 
ငါ့ကို စိတ်ကြိုက်ပစ်ခတ်ပါ အချစ်+ လိင်= အနုပညာ
ကမ္ဘာ့မီဒီယာရဲ့ အသည်းစွဲ ကင်ဂျုံအီးလ် သေပြီ
ငါတို့ ခေတ်လူမှု ဆော့ဗ်ဝဲဟာ အဆင့်မြင့်ရှုပ်ထွေး
အစ်ကို ဟိုမှာ စစ်ကြီး ဒီဘက်လာနေတယ် လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ရမလား
အမှန်က အမှားကို သွေးကြောထဲ စနစ်တကျ ထိုးသွင်းခဲ့တာပဲ
ခေတ်ဆိုတာကြီးဟာ ကွင်းပြင်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ အော်ဟစ်ပြေးလွှားနေတယ်
( ကဗျာခေါင်းစဉ်မှ အပ ဆရာဇေယျာလင်းနဲ့ ဆရာအောင်ရင်ငြိမ်းတို့ ရဲ့ စာသားများဖြစ်ပါတယ်)
ညွှန်း။ ။ ကဗျာဆန်နေခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်း။
၂၈၊ ၅၊ ၂၀၁၃
Posted by လင်းလက်တာရာ at 02:00 No comments:
အစက်အပြောက်တွေနဲ့ ဗျောက်ထ ၊ကျော်ရစ်ပစ်လို့ မရတဲ့ ချန်နယ် ၊ ရီမုတ်ကြောင်နေတယ်
ရာသီဥတုက အရက်သမားမယားရဲ့ လင်သားလို ပါးချည်းလှိမ့်ရိုက်
Icon စော်နံတယ် ဆီလီကွန်စော်နံတယ် မဲစော်နံတယ် နံရင်နံတယ်လို့ မှတ်
နံရံမှာ သွေးကွက်တွေ၊ ကယ်ရီကေးချားကညှော့်ချက်တွေ
အော်သံတွေ၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုတွေ၊ ခေတ်မီတက်တူး ဒီဇိုင်းတွေလိုမျိုး
မြင်လား မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ချော်ရည်ပူချောင်းကြီး ဖြတ်စီးနေတဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်
ဘယ်ညာဘယ်ညာ လူကျီးကန်းတွေ တောင်းမှောက်ကိုရှာ ဘယ်ညာဘယ်ညာ
တောလည်းမှောက် တောင်လည်းပြုန်း မြစ်လည်း အပျိုရည်ပျက်
ကျွန်တော့်နာမည်က အစိမ်းချုပ်တောအုပ်ပါ ကျွန်မနာမည်က ကွန်ကရစ်မြစ်မင်းပါ
တောင်ရဲ့ ဗိုက်သားထဲ ရေနံပိုက်လိုင်းကြီး ဖောက်ဝင်သွားတာ လကွယ်ည သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ကြီး
လမိုက်ကွယ်ည ဘယ်တော့သာမှာလဲ မေးခွန်းဟာ ခွေးလေခွေးလွင့် ၁၀၉/၁၁၀ ပလက်ဖောင်းခေါင်းအုံး
အကြီးမားဆုံးစွတ်ကြောင်းရာဟာ ငွေတွင်းလမ်း တနည်း သေတွင်းလမ်း တနည်း ငရဲလမ်း
မျက်ရည်ပေါ် မျက်ရည်ပျိုး မျက်ရည်ပင် မျက်ရည်ပန်း မျက်ရည်ပွင့်
ဘာညာ ဘာညာ ' ဒါက ဒီလို ရှိတယ်လေ လူလေးရ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ '
ဘာညာ ဘာညာ ' ဒါက ဒီလိုရှိတယ်လေ လူလေးရ ဘာသာရေး ဆိုတာ '
ပုံပြင်ကို အင်ဂျင်တစ်လုံးလို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လို့ မဆုံးတော့
ပြသာဒ်ဟာ မီးတောက်မီးလျှံတွေ ပန်လို့ 
လူတွေ သေပေးခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေ ပျော်တော်ဆက်ပေး နေရပါသည်
သွပ်ဆူးကြိုးမှာ အညွှန့် ကျိုးသွားသူ အဖူးအငုံလေး
ချန်ဂီ လေဆိပ်မှ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ ပြည်တော်ပြန်လက်ဆောင် သန္ဓေသား
လက်နက်ကြီးငယ် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ကိုင်ဆောင်လျှက် ဘဝထဲကို ဝင်နေကြပါသည်
လက်နက်ကြီးငယ် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ကိုင်ဆောင်လျှက် လူသားအာဝါသထဲကို တိုးဝှေ့ နေကြပါသည်
တရုတ်ဖြစ်တွေ ဟာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ စုတ်သွားတယ် တရုတ်စုတ်တွေဟာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်
ရှေ့ တန်းစစ်မြေသားမှာ မိသားစုဓါတ်ပုံလေး တိုက်ပွဲကျသွားတယ်
လာခဲ့တယ် ရက်ကန်းသံနဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့ အညာကနေ စက်မှု ထုတ်ကုန်တွေဆီ
စက်မှု ထုတ်ကုန်တွေဆီကနေ ရက်ကန်းသံနဲ့ ရက်လုပ်ထားတဲ့ အညာဆီ လာခဲ့တယ်
အဲဒီအညာဟာ နည်းပညာပေါင်းစုံနဲ့ ဖျက်စီးလို့ မရတဲ့ အညာသားလေးတစ်ယောက်ကို မွေးခဲ့တယ်
ဂျပန်က ကြွေးမြီတွေ လျှော်ပေးလိုက်သလိုမျိုး ဥရောပက ပိတ်ဆို့ မှုတွေ သော့ဖွင့်ပေးလိုက်သလိုမျိုး
ကြပ်/ ကျစ်ထားတဲ့ မိဘပြည်သူတွေကို တစ်ရစ် နှစ်ရစ် လောက် လျော့ပေးပါလား ဇာတ်ဆရာ
ထိုင်ခုံ ၊ မိန်းမပျိုလေး 'က' ရေးဆင်နေသလို မြေပုံပေါ်က ထိုင်ခုံ
လက်ရင်းဒိုးနာမည် ' The electric chair '
ရွှံ့ နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အိုးပုတ် ချိုးရုပ်လေးမှာတောင် ပျော်ရွှင်မှု စစ်စစ်ရှိတယ်
ချိုးငှက်စစ်စစ်လေးကရော ရွှံ့ ယောင်မဆောင်တတ်ဘူးလား
မြို့ပြဝါယာကြိုးတွေထဲ ရှော့ခ်တွေ အပြေးအလွှား မြို့ပြပုံစံခွက်ထဲ သစ်ပင်တွေ ခေါင်းညှပ်ခံနေရ တဖွားဖွား
၁၁/ ၆ ပေါ် ဖြာကျနေသော အနက်ရောင် Profile Pictures များ ၊ အသုဘကျွန်းဆွယ်
လူဆိုးတွေ ကိစ္စဝိစ္စ ပြီးမှ ရဲတွေ ရောက်လာတယ် ဒါက ရုပ်ရှင်
လူကောင်းတွေ ကိစ္စဝိစ္စ မစခင် ရဲတွေ ဝိုင်းလာတယ် ဒါက ရိုက်ကွင်း
' လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုနေသော လူကြီးမင်းမှာ သမိုင်းကို မောင်းထောင်း၊ သမိုင်းကို မိုင်းထောင်နေပါတယ် ရှင်'
၁၁၊၊ ၆၊ ၂၀၁၃
Posted by လင်းလက်တာရာ at 01:17 1 comment:
အွန်လိုင်းလူငယ်ကဗျာစကားဝိုင်း။ ဆရာအောင်ရင်ငြိမ်းေ...
လင်းလက်တာရာ စကားလုံး မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ် ခေတ်ပြို...
အဲဒီသန္ဓေသားကို တာဝန်အပြည့်အဝယူတယ် ကဗျာကိုတော့ ကွန်...
အစက်အပြောက်တွေနဲ့ ဗျောက်ထ ၊ကျော်ရစ်ပစ်လို့ မရတဲ့ ခ...